Wuxi Lead Precision Machinery na-enye ihe dịgasị iche iche maka akụkụ ọdịnala gị: aluminom, ígwè, igwe anaghị agba nchara, titanium, ọla kọpa, ọla, ọla kọpa, plastik na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Anyị ji nganga na-eme prototype na mmachi mmepụta akụkụ na mgbakọ maka a dịgasị iche iche nke ọrụ. Wuxi Lead Precision Machinery emepụtala akụrụngwa maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị a
Ọ bụrụ na ị nwere akụkụ titanium kwesịrị ịkpụzi, anyị bụ otu n'ime isi mmalite na ọnụ ala.
Ọ bụrụ na ị nwere akụkụ plastik chọrọ igwe ma ọ bụ kpụzie, anyị bụ otu n'ime isi mmalite dị oke ọnụ na ọnụ ọnụ, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ n’inwere akụkụ ọla iji rụzie ya, anyị bụ otu n’ime ezigbo ike na ọnụ ala, anyị nwere ike ịrụ ọrụ ahụ n’ụzọ ziri ezi.
Ọgwụgwọ elu bụ ihe nke mkpụrụ ihe iji mepụta oyi akwa na matriks nke ihe igwe, nke anụ ahụ na nke kemịkal nke akwa nke usoro ahụ.